पिच बिगारेको आ'रोप लागेपछि पहिलो पटक बोले किङ स्मिथ ! खासमा भएको यस्तो रहेछ |
पिच बिगारेको आ’रोप लागेपछि पहिलो पटक बोले किङ स्मिथ ! खासमा भएको यस्तो रहेछ
२०७७, २९ पुष बुधबार १८:४६ January 13, 2021 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं : अस्ट्रेलियन ब्याट्सम्यान स्टिभ स्मिथ वि वादमा तानिएका छन्। सिड्नी टेस्टको अन्तिम दिन भारतले ब्याटिङ गरिरहदा जानाजान क्रिज बिगारेको आ रो प स्मिथमाथि लागेको छ। स्मिथले कुनै ख रा ब नियत नभएको बताउँदै आ रो पले आफूलाई दु: खी बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
अस्ट्रेलियाका पूर्व कप्तान समेत रहेका स्मिथले अन्तिम दिनको ड्रिङ्क्स ब्रेकका दौरान क्रिजमा बुटले कोतरिरहेको देखिएको थियो। स्टम्टमा जडान गरिएको क्यामेरामा उनले बुटले पिच कोतरेको देखिएको थियो। कतिपयले स्मिथले जानाजान भारतीय ब्याट्सम्यानले ब्याटिङका लागि बनाएको संकेत मेटाएको आ रो प लगाएका थिए। सो आ रो पको स्मिथले अ स्वीका र गरेका छन्।
उनले न्यूज कर्पसँग कुरा गर्दै भनेका छन्,’म हामीले गरेको बलिङ कहाँ लागिरहेको छ भन्ने कुरा हेरिरहेको थिए। मैले हाम्रो बलिङ भारतीय ब्याट्सम्यानले कसरी सामना गरिरहेका छन् भन्ने जाँच गरिहरेको थिए। यो मेरो बानी हो। यस्तै मैले केन्द्रलाई मार्क पनि गरिरहेको थिए।’
उनले अघि भनेका छन्,’सिड्नी टेस्टको अन्तिम दिन भारतीय ब्याट्सम्यानले सानदार प्रदर्शन गरे। तर यो घटनाको चर्चा बढि छ। यो निराशाजनक छ।’ यसअघि अस्ट्रेलियाका कप्तान टिम पेनले पनि स्टिथको बचाउ गरेका थिए। पिनले भारतीय ब्याट्सम्यानले राखेको संकेत स्मिथले नबिगरेको बताएका थिए। तर पनि यो विषय समाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको थियो। कतिपयले स्मिथको चर्को आलोचना गरेका थिए।
सिड्नी टेस्टको अन्तिम दिन भारतीय ब्याट्सम्यानले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दा खेल बराबरीमा सकिएको थियो। सिरिजको निर्णायक चौथो टेस्ट शुक्रबारदेखि ब्रिसबेनमा सुरु हुँदैछ। यसअघि सन् २०१८ मा बल टेम्परिङ वि वाद का ण्डमा मुछिएपछि स्मिथलाई कप्तानबाट हटाइदै प्र ति ब न्ध समेत लगाइएको थियो।